तेरिया मगरको घरमा यस्तो दृश्य ! सबै बने भाबुक, भरियो आखामा आसु…………… भिडियो हेर्नुस
नेपालकी चर्चित डान्सर तेरिया मगरलाइ नचिन्ने को होला। डान्स को जगतमा उनले आफ्नो अलग पहिचान नै बनाएकी छिन्। नेपालका अलग अलग प्रतिस्पर्धा मात्र जितिनन , भारतकै ठुलो डान्स शो डान्स इन्डिया डान्स जितेर उनले भारतमा समेत आफ्नो नामको डंका पिताइन। अहिले तेरिया मगरको डान्स नेपालमा मात्र नभएर भारतको विभिन्न सहरमा हुने शो हरुमा समेत हुने गरेको छ। दर्शकको मन जित्न सफल तेरिया मगर ले अहिले सम्म संसार भरका २० भन्दा बढी देश मा आफ्नो नाच देखाइ सकेकी छन ।
डान्स इण्डिया डान्सको उपाधि जित्दा मात्र १४ वर्षकी तेरिया मगर अहिले १८ बर्ष पुगिसकेकी छिन । निकै चर्चित बनेकी तेरियाले सानै उमेरमा डान्स शो जितेपछि भारत तथा नेपालका विभिन्न ठूला कार्यक्रममा सहभागी भैसकेकी छिन। अहिले उनको चर्चा र डिमाण्ड झन् बढी छ। उनको डान्सकै कारण उनि बिश्व भरी चर्चा कमाइसकेकी छिन । तेरिया डान्स मात्र राम्रो गर्दिनन गीत समेत उत्तिकै राम्रो गाउछिन। पछिलो समय उनले गाएको पहिलो कभर गीत ‘ तिम्रो मायाले बाधेर राख’ भन्ने गीत बजार आएको छ। जुन गीत कुनै प्रोफेसनल गायक ले भन्दा कम गएकी छैनन्। उनले आफुलाई राम्रो गायिका समेत प्रमाणित गरेकी छिन्।
रुपन्देही रुद्रपुरकि तेरिया मगरको सबै परिवार पहिलो पटक मिडियामा आएक छन्। अन्तरबार्ता समेत गरिएको यस बसाइमा परिवार बीच सुख दुखको कुरा भएको थिय। यसै क्रममा सबै परिवारको आखामा आसु समेत देखिएको थियो। पुरानो कुरा सम्झेर सबै जना भाबुक भने र आसुको धारा नै बगेको थियो। छोरी संगको पुरानो कुरा सम्झेर बाबुले सम्झना सुनाउदा तेरियाको आखामा आसु ले भरिएको थियो।
नेपाली जनताले दुख पाएको भन्दै रास्ट्रपतिको सवारीमा रविको सुझाब...
Previous Article मलेसियाको कार्यक्रममा गएका कलाकार अझै बेपत्ता, राजेश पायल राईले गरे यस्तो अपिल…….भिडियो
Next Article गलबन्दी गीतको सम्बन्धमा गायक शम्भु राइले यस्तो बोले मिडियामा………भिडियो